हामी कपाल क्षेत्र मा काम जारी छौँ। हामी आफैंलाई मूल डिजाइनबाट केहि दूरी बनाउँदछौं र हामी कम यथार्थवादी तर बढी बुर्टोनियन संरचना बनाउनेछौं। जे भए पनि तपाईले विकल्पहरु र डिजाइनहरु तपाई स्पष्ट रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, म स्केचमा केहि संशोधनहरू अभ्यास गर्नेछु, तर म तपाईंलाई लाग्छ कि यदि तपाईं आफ्नै स्केचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई सजिलो हुनेछ किनकि तपाईंले आकारहरू मात्र खोज्नुपर्नेछ। जे भए पनि, सुरु गरौं!
हामी जान्छौं कलम उपकरण र हामी यसलाई कालो स्ट्रोक र पारदर्शी वा अवस्थित भरण रंग दिन्छौं। अर्को कुरा हामी गर्नेछौं सिल्हूट सिर्जना गर्नुहोस्। एकचोटि सिर्जना गरे पछि हामी यसलाई यस्तो ढाँचामा भर्नेछौं जुन शुद्ध सेतो रंगबाट सुरू गरेर सेतो रंगमा शुरू हुन्छ तर यस पटक डिरटिअर।
अर्को कुरा हामीले हेर्दै गरेको चार हरियो निलो लकहरू बनाउनु हो, यसको लागि हामी त्यसलाई पेन उपकरणले सिर्जना गर्नेछौं र निश्चित रूपमा हामी तीसँग भर्नेछौं। रैखिक र ठाडो ढाँचा वा ढाँचा त्यो एक बाट सुरु हुन्छ निलो रंग (तल) एकदम गाढा एक हरियाली पनि (टुप्पोमा)।
कपालको चमकमा काम गर्न, हामी यसलाई कलम उपकरणको साथ फेरि एक चमक सिर्जना गर्नका लागि प्रयोग गर्दछौं जुन कपालको आफ्नै बनावटसँग राम्रोसँग फिट हुन्छ। हामी धेरै अवस्थाहरू र अनुमानहरूको साथ आकार सिर्जना गर्न कार्य गर्दछौं र सबै भन्दा अनियमित र प्राकृतिक तरिकामा। हामी फेरि यो चमकलाई एक बाट भर्नेछौं अपमानित। यस अवस्थामा हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं विभिन्न संयोजनहरू, यो हामीले सिर्जना गर्न चाहेको प्रभाव र गहिराइ हामी चाहान्छौं कि चमक चाहिन्छ र वास्तवमा केश, रंग र हाम्रो चरित्रको लुकमा निर्भर गर्दछ। यस अवस्थामा म यसलाईaभरिने छ रेखा र ठाडो ढाँचा जुन तल हरियो र from्गबाट ​​सुरू हुन्छ र माथिको माथि हल्का निलो हुन्छ र एक ब्लेडि mode मोड स्पष्ट पार्नुहोस्। अर्को राम्रो विकल्प भनेको ग्रेडीएन्ट सिर्जना गर्नु हो जुन कालोबाट सेतोमा शुरू हुन्छ र रास्टर मिश्रण मोड लागू गर्दछ।
निधारको माथिल्लो क्षेत्रमा लक सिर्जना गर्न, हामी कलम उपकरण प्रयोग गर्नेछौं, लंगर बिन्दुमा उपचारलाई जोड दिदै यसलाई लचिलो र घुमाउरो स्वरूप दिन्छ। यस अवस्थामा हामी एक लागू गर्नेछौं तेर्सो र रेखीय ढाँचा बाट सुरू सेतो टोन (बाँयामा) एक थप टोनमा खैरो (दायाँतर्फ)।
पार्श्व र तल्लो छायाको लागि, प्रक्रिया धेरै समान छ, केवल कि हामी प्रत्येक टुक्राहरूको अस्पष्टता परिमार्जन गर्दै छौं सम्पूर्ण कपालमा बढी प्राकृतिकता र ठूलो गतिशीलता सिर्जना गर्न। लक्ष्य बारीहरू बनाउने हो, हामी ती समाधानहरू हटाउनेछौं जसले विशाल, भीड र एकजुट नतिजा प्रदान गर्दैन। हामी यो विभिन्न ब्लेन्डिंग मोडहरूसँग प्ले गर्दैछौं छेउ छाया मैले एउटा प्रयोग गरेको छु अस्पष्टता %०% भन्दा कम र गुणनमा फ्यूजन मोडको साथ। यो आवश्यक छ कि तपाईंले यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि यी टुक्राहरू अनियमित हुनुपर्दछ, तिनीहरू पूर्णरूपमा फिट हुनुपर्दछ माने बेरोजगार आउने र बाहिर जाने बाटोमा।
हामी यसको लागि भौंहरू सिर्जना गर्न जानेछौं हामी हाम्रो गाइड को स्तर सक्रिय गर्नेछौं, हाम्रो स्केच। यस केसमा हामी मूल सन्दर्भ स्केच लिनेछौं जबकि हामी यसलाई पत्रमा पछ्याउँदैनौं, किनकि हामी केहि परिमार्जन थप्नेछौं। एकचोटि हामी आफूले बनाएको आकृतिसँग सन्तुष्ट भएपछि हामी यो टुक्रालाई फेरि रेखा र ठाडो ढाँचामा भर्नेछौं। यस अवस्थामा, ढाँचा हल्का हरियो र color्गबाट ​​हल्का निलोमा शुरू हुन्छ। एक पटक यो समाप्त भएपछि हामी उपकरण प्रयोग गर्नेछौं परावर्तन गर्नुहोस् (याद गर्नुहोस् कि यो O कुञ्जीमा छ, वा घुमाउने उपकरणको उही बटनमा)। फेरि, एक पप-अप विन्डो देखा पर्नेछ र हामी क्लिक गर्नेछौं ठाडो अक्ष लिने र त्यसपछि «प्रतिलिपि» बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी ती भौहें राख्नको लागि उपयुक्त स्थान खोज्नेछौं, यस अवस्थामा सही स्थान आँखाको माथिल्लो क्षेत्रमा सिर्जना गरिएको छाया हो, यसले अझ बढी यथार्थता दिन्छ।
हामी तल्लो नेत्र क्षेत्रमा सानो भोल्युम सिर्जना गर्नेछौं, हामी गालामा हड्डीमा काम गर्ने छौं। हामी कलमको साथ एउटा आकार सिर्जना गर्नेछौं जुन हामी देख्दैछौं र यसको साथ ए भर्नेछौं म ह्रास गर्दछु यो जान दिनुहोस् सेतोबाट कालो रंगमा, हामी लागू गर्नेछौं रास्टर ब्लेन्डिंग मोड। यसको स्थानको सम्बन्धमा, यो सिफारिश गरिन्छ कि यो भौंको विपरीत क्षेत्रमा हुनु हो, छायाको तल्लो सीमामा यस तरीकाले हामी अधिक कम्प्याक्ट र सन्तुलित संरचना सिर्जना गर्नेछौं। हामी यो कुरा सुनिश्चित गर्नेछौं कि यस ढाँचा सफा गरिएको छ र नाकको पुलमा बनेको बनावटमा सकेसम्म सम्मिश्रण गर्दछ किनकि दुबै तत्वहरू फैलिरहेका छन् र यसले गहिराइको अनुभूति गराउनु पर्छ।
अनुहार विवरण मूलतः यहाँ अंतिम छन्, के यो तपाईको रूचि भएको छ? तपाईंसँग केहि सुझावहरू, प्रश्न वा समस्याहरू छन्? यदि हो भने, त्यसो भन्न हिचकिचाउनुहोस् र म तपाईंलाई तपाईंलाई आवश्यक परेकोमा म सहयोग गर्नेछु। यदि तपाईं यी संकेतहरूको अनुसरण गर्दै टिम बर्टनको शैलीको समान डिजाइन बनाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ भने, यसलाई हामीसँग साझा गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » ट्यूटोरियल: एआई (१) मा टिम बर्टन-शैली वर्ण डिजाइन गर्नुहोस्
सम्पादकीय डिजाइनका लागि InDesign टेम्पलेट्स